Nwepu ikike teknụzụ ndị nwere ikike site na nche Nche | Site na Linux
Nsogbu dị ugbu a n'etiti ihe ùgwù nke iji «Tecnologías Libres» ma ọ bụ «Tecnologías Privativas» abụrụla ọgụ dị egwu n’oge anyị a, ebe obu na obu agha nke dabere na «Seguridad de la Información».
Na ọgụ a, akụkụ abụọ nke ndị na-akwado ya nwere ezigbo nkọwa ma rụọ ụka. Gbalị ịnwale ndị ọzọ, nke ha ma ọ bụ na-abụghị nke raara onwe ha nye ma ọ bụ na ọ bụghị, nke «Tecnologías Libres» o «Tecnologías Privativas», na-ahọrọ otu ma ọ bụ nke ọzọ, na-emeri nsogbu nke onwe ha, karịsịa ndị metụtara ubi nke «Seguridad de la Información».
N'oge a, banyere ịhọrọ Kedu ụdị teknụzụ (n'efu ma ọ bụ onye isi) ka anyị kwesịrị inye ohere na ndụ anyị kwa ụbọchị, ma na nke onwe anyị, mbipụta transculturation nke ụkpụrụ ndị nnukwu ụlọ ọrụ azụmaahịa nyere na ngalaba teknụzụ, «Hardware» na «Software».
Merciallọ ọrụ azụmahịa, nke kachasị na-akwado ngalaba nke «Tecnologías Privativas», na-enye ha ihe ịrụ ụka adịghị ya na ha karịrị ha «Tecnologías Libres». Mana Ànyị kwesịrị inwe ihe ùgwù «Tecnologías Privativas» banyere «Tecnologías Libres»?
Agbanyeghị, ọtụtụ ndị ọrụ mgbe ị na-ahọrọ na / ma ọ bụ jiri teknụzụ ọ bụla, akwụsịghị inyocha ihe echiche dị iche n'etiti ha abụọ, ma pekarịrị ndị metụtara ubi nke «Seguridad de la Información». Ihe na-efunahụ bụ ọrụ, ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ naghị arụ ọrụ, maka ọrụ ọ chọrọ iji ya. Nke ọ bụchaghị ihe ọjọọ, mana ọ dị mkpa.
Banyere isiokwu a dị oke mkpa, enwere ọtụtụ akwụkwọ banyere ya n'ịntanetị, ma ihe magburu onwe isi iyi gakwuru bụ ederede nke onye Venezuelanlogist na ọkà mmụta kọmputa Venezuescar González Díaz dere, nke anyị na-akwado ịgụ mgbe e mesịrị.
1 Kedu ihe bụ teknụzụ efu na Priv Technologies?
1.1 Onwe Software
1.2 Nbudata Software
1.3 Pụrụ iche Technologies
1.4 Teknụzụ efu
1.5 Ihe Ọmụma n'efu
Kedu ihe bụ teknụzụ efu na Priv Technologies?
Enwere otutu akwukwo banyere ya, na isiokwu a nke Software efu, dentro y pụọ site na blọọgụ anyị. Ma, banyere Teknụzụ n'ozuzu, enwere obere ihe na-atụle mgbe ụfọdụ na gburugburu ebe obibi anyị. Ya mere na nchịkọta anyị nwere ike ikwu na:
Ọ bụ sọftụwia ahụ "Nwere onye nwe ya" na n'ihi na "A ghaghị akwụ ya ụgwọ", dịka otu ị si akwụ ụgwọ maka ngwaike. Ya mere, ya nwere ikikere nke onye ọrụ nwere mmachi na mmachi doro anya.
Ọ bụ software na "Kwanyere nnwere onwe ùgwù" nke ndị ọrụ na obodo. N'ikwu okwu sara mbara, ọ pụtara na ndị ọrụ nwere nnwere onwe ịgba ọsọ, idetuo, kesaa, ịmụ ihe, dezie ma melite ngwanrọ ahụ. Nke ahụ bụ, sọftụwia na - akwụghị ụgwọ "Ọ bụ ajụjụ nke nnwere onwe, ọ bụghị ego".
Pụrụ iche Technologies
Ndi ndi ahu "Echebe ma ọ bụ mechie ndị ọzọ" site n'iji na ire ahia na ikike ikike. Ndị ọrụ gị nwetara nsonaazụ dị mma n'ọnọdụ mgbanwe Tụkwasị obi na nzuzo na ọrụ ọma nke otu ahụ site n'aka onye nrụpụta.
Ha bụ ndị nwere "Mepee ụkpụrụ" na-ekwe nkwa na "Nweta niile isi koodu". Ọ na-ejikọ ọnụ nke teknụzụ na sayensị nke na-enye ohere mmepe ngwaahịa na ọrụ ndị na-egbo mkpa mmadụ ma kwado mmezi ha na gburugburu ebe obibi. Ndị a na-ebilite dị ka ndọtị nke echiche na nkà ihe ọmụma nke sọftụwia na-akwụghị ụgwọ etinyere na teknụzụ, ya bụ, ịkwanyere nnwere onwe nke onye ọrụ ma ọ bụ onye na-azụ ahịa otu ihe.
N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ dị mma ịkọwapụta ihe banyere echiche a na-akọwachaghị nke ọma, nke bụ:
Ihe Ọmụma n'efu
Enwere ike ịkọwa ya:
Ọ bụ nke ahụ ihe omuma nke apuru imuta, tugharia, tinye ya, kuziere ya ma kesara ya n'enweghi mmachi, ma enwere ike iji ya dozie nsogbu ma ọ bụ dịka mmalite maka ọgbọ nke ihe ọmụma ọhụụ.
Ndị na-agbachitere «Tecnologías Privativas» arụ ụka banyere «Seguridad de la Información» que a proprietary ma ọ bụ emechi usoro bụ odi mfe ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye nwere ohere ya "n'ime", nke ahụ bụ, koodu mmalite ya, imewe ya, ozi ya, n’etiti ihe ndị ọzọ dị mkpa ma ọ bụ dị mkpa.
Inyere bụ «Tecnologías Libres», nke na-ekwupụta ọdịdị dị iche na nke megidere nke «Tecnologías Privativas». Ozo nke oma site na uru, dika: N’adabereghi n’onye na-enye oru uzu, na inwe ike ime nyocha na nyocha ozo na ya, jiri ndi ozo, karia ndi ozo maka ya, si otú ahụ mee ka mmegharị, mmezi na njikọta na-arụ ọrụ.
Ebe ọ bụ na echiche nke «Seguridad de la Información» dabere na usoro mmepe dabere na nkwado nke ndị ọrụ ya, yana nghọta nke usoro metụtara ọrụ nkwado nke onye ọ bụla n'ime ndị metụtara otu usoro ma ọ bụ ọrụ, enwere ike kwubie n'ụzọ doro anya na uru nke «Tecnologías Libres» banyere «Tecnologías Privativas» ha siri ezigbo ike.
Na mpaghara a karịsịa, nke «Seguridad de la Información», las «Tecnologías Privativas» enweworị ogologo akụkọ gbasara mmebi iwu nzuzo, iji akụnụba ma ọ bụ nledo nke gọọmentị.
Agaghị agụta, ahụmịhe na-adịghị mma nke iji data nkeonwe nke ndị ọrụ eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi, nke mere ka ha nọrọ n'ọnọdụ ọjọọ banyere ndị nwe ụlọ na teknụzụ. Mgbe na-arụ ọrụ ụdị n'okpuru «Tecnologías Libres», na-emekọrịta ihe ma na-emeghe, ha anaghị adị mfe ịmalite ọrụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu.
N'ikpeazụ, Ọ dị mkpa iji mesie ya ike, ebe ọ bụ na enweghị ike ịgọnahụ ya mgbe ị na-ekwu maka otu esi abanye nke «Software Libre» na ụwa nke teknụzụ, anyị ghọtara nke ahụ n'ogo nke sava, Data Data na Scientific Supercomputing Centers, ebe Linux («Software Libre») Ọ bụ ya bụ eze. Na nke ahụ n'ogo ndị ọrụ, njupụta karịrị akarị na-eto ma ọ nọ n'ụzọ ziri ezi, n'agbanyeghị ntakịrị mgbasa ozi ọha na nke a.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere isiokwu a, anyị na-akpọ gị òkù ka ị gụọ isiokwu ndị metụtara anyị n'oge gara aga, nke ị nwere ike ịchọta na njikọ ọ bụla n'okpuru: Nkeji edemede, Nke abụọ y Isiokwu nke atọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Free na proprietary teknụzụ si n'ọnọdụ nke Ozi Nche
Michael Mayol dijo
Arụmụka ahụ adịkwaghị n'etiti ndị ọkachamara, 100% nke ndị nnukwu kọmputa, yana ihe karịrị 99% nke sava nke nnukwu ụlọ ọrụ na-eji Lignux na PLiCA (Ihe Omume Free na Open Source - FOSS -).
Na kọmpụta nke ụlọ na obere azụmaahịa - SOHO - enweghị arụmụka ọ bụla - PLiCA ga - emeri ya - naanị ihe ọmụma na - ezighi ezi nke ndị na - azụ ahịa na - eme ka ha rie sistemụ na mmemme na - adịghị mma, n'ihi na ha bụ ndị nwe ụlọ, ọkacha mma n'ihi na ọ bụ ha maara site na mgbasa ozi na PLiCA enweghị.
Enweghị arụmụka a na-ahụ anya, naanị nnukwu ọdịiche dị n'etiti ndị ọkachamara - na ndị na-amụrụ onwe ha ọzụzụ - na ndị ọrụ na-azụghị onwe ha nke na-eme ka ahịa abụọ dị iche iche na-arụpụta ihe, nke dị adị n'oge UNIX nwụrụ anwụ n'oge na-adịbeghị anya, ma nwee ike ịkọwa maka ihe kpatara ya ọnụahịa, mana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Lignux bụ n'efu ka a kọwara naanị site na enweghị ọzụzụ nke ndị na-eme mkpebi.
Zaghachi Miguel Mayol
Daalụ, Miguel. Ana m ekele gị maka okwu gị. Ma otu o si dị mma nke ukwuu, emere m obere nyocha (mgbazi) banyere ya, gbasara isiokwu ahụ, gụnyere echiche gị.
"Mana na Lignux ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'efu, a na-akọwa ya naanị site na enweghị ọzụzụ nke ndị na-eme mkpebi", nke ọma, ma ọ ga-ekwe omume yana ịdị adị nke mmetụta netwọkụ na ụdị (dịka ọmụmaatụ, ebe ọ bụ na onye ọ bụla na-eji MS Office, ọ na-esiri ike iji LibreOffice n'ihi Inweghị ike ịrụkọ ọrụ ọnụ na-ebugote akwụkwọ ahụ, ọ bụrụ na imirikiti ndị otu a na-eji otu, ndị pere mpe ga-emegharị, ma ọ bụghị nke ọzọ, ị ga-eji ihe onye isi ahụ kwuru).
Mana ọ bụkwa eziokwu na enwere ihe ndị ọzọ dị mkpa: 1. - Ntinye nke ịzụ Windows arụnyere na laptọọpụ ọhụrụ nke ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ahịa niile, 2.- Enweghị elebara anya na GNU / Linux site na ụlọ ọrụ nke mmemme mmemme: site egwuregwu dị ka Fortnite na mmemme sitere na ụlọ ọrụ dị iche iche dịka onye na-emepụta ihe osise foto Hoffman ruo n'oge na-adịbeghị anya, n'echiche a igwe ojii na-arụ ọrụ ihu ọma anyị site na ịmegharị ihe niile na weebụ. Mana ụfọdụ na-efu ka AutoCAD, Photoshop, PowerBI, wdg. dị oke mkpa na ngalaba ebe ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ịrụ ọrụ.
Ọtụtụ ngwa enweghịkwa nghọta dị mfe iji na ntinye, nhazi na ojiji, yana "ọmarịcha" nke ụfọdụ ọrụ: dịka ọmụmaatụ ụdị akpaka nke MS Office vesos LibreOffice, Nweta akụkọ na Emebeghị LibreOffice Base, wdg.
N'ihi enweghị ego, n'etiti ihe ndị ọzọ n'ihi nsogbu nke monetizing ọrụ nke ngwanrọ nke nweere onwe ya idetuo (ọbụlagodi na erere nke izizi), ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ndị nwe ụlọ na-adị ngwa ngwa n'ọtụtụ mmepe, dịka ọganihu MS mere na Ubuntu na okike nke sistemụ maka ngwaọrụ niile.
Arụmụka dị ezigbo mma na nke ọma! Maka Linux na Desktọpụ iji nwee ihe ịga nke ọma, ọ ga-anọgide na-akwụghị ụgwọ ma nwee ntụkwasị obi, mana ọ bara uru maka azụmaahịa na ndị mmepe, maka ezigbo mmụba yana ezigbo ego. Ọ bụ ezie na nke abụọ na-achọ igbu nke mbụ.
Oscar Gonzalez Diaz dijo
Isiokwu a kwupụtara otu onye edemede m, ị nwere ike ịkọ m dị ka isi mmalite.
Zaghachi Oscar González Díaz
Daalụ, Oscar. Enweela m, etinyelarị arịrịọ gị n'okwu a. Daalụ maka okwu gị na nyocha gị.
Ahụla m na ị tinyeghị aha nna mbụ (González) na tilde ga-efu na carscar ọ bụ ezie na ọ dị ka Óscar n'onwe ya hapụrụ ya n'aha ya.
Ekele, Oscar! Emeworị m mgbazi aha gị, na paragraf ebe m kpọtụrụ gị aha.
Achọpụtara adịghị ike ọhụụ na usoro WPA3 na EAP
Linus Torvalds na-akwụsị nkwado ọkwọ ụgbọala floppy